किन आजकल भनाइहरु बिबादास्पद हुन्छन ? नायिका करिश्मा - khabarxpress.com किन आजकल भनाइहरु बिबादास्पद हुन्छन ? नायिका करिश्मा - khabarxpress.com
आज: | Fri, 14, Aug, 2020
आज सुनको मूल्य छ हजार दुई सयले घट्यो
भारतका पूर्वराष्ट्रपति प्रणब मुखर्जीको स्वास्थ्य अवस्था गम्भिर
काठमाडौं उपत्यकामा १३४ जना कोरोना सङ्क्रमित पुष्टि अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी
लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई अदालतले कामकाजमा रोक लगायो
२०७७, १७ असार बुधबार १४:०४ मा प्रकाशित ( १ महिना अघि) १७९९ पाठक संख्या
अहिले सिने नगरीमा केही कलाकार कलाकार बिच झगडा भैरहेको छ । सामाजिक संजालमा एकले अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप लगाउने शिलशिला जारी छ । यही बिच यस्तो अवस्था किन भयो भन्ने बिषयमा सदाबहार नायिका करिश्मा मानन्धरले आफ्नो सामाजिक संजाल फेशबुकमा आफ्ना बिचार पोखेकी छन् ।
“केही दिन देखि बेला बेलामा चलचित्र नगरीका श्रष्ठा र सर्जकहरुले अन्तरवार्ता र समाजिक संजालमा पोखेका बिचार र भनाइले सामाजिक संजाल तातेको देखिन्छ । यो लकडाउनको परिणाम हो कि भन्ने पनि भान हुन्छ ।विगत देखि नै चलचित्र पत्रकार र कलाकारहरुको निकै नजिकैको सम्बन्ध छ । कुन चलचित्र पत्रकारलाई थाहाँ छैन होला को कलाकार र प्राबिधिकको के कस्तो आनि बानी छ, या कुन चलचित्र कर्मीलाई थाहाँ छैन कुन पत्रकार कस्तो आचरणको छ । एउटा भाइचाराको सम्बन्ध छ र रहनेछ ।
सार्वजनिक व्यक्तित्व भएपछी अफुलाई जानकारी नभएको विषयमा बोल्दा आलोचित हुनु सामान्य हो त्यो बाट पाठ सिकेर आफुलाइ सुधार गर्ने हो र तेस्को जिम्मा लिनुपर्छ ।
सबै कुरामा जानकार नहुनु अपराध होइन । तर कुनै कुनै अभिव्यक्तिले आफ्नो व्यक्तित्व र अफ्नो क्षेत्रलाई नै असर पारिरहेको हुन्छ ।
कुनै पनि क्षेत्रको निर्माण एकै रातमा भएको हुदैन यसले लामो समय लिएको हुन्छ ।हाम्रो क्षेत्रको प्रकृति नै नयाँ पुस्ता आएपछि पुरानोको ठाउँ लिने खाले हो । हुनत सबै क्षेत्रमा यस्तै हुन्छ तर चलचित्र क्षेत्रमा अझै यो चलन बढी छ ।प्राविधिकलाई छोडेर कलाकारहरुको मात्रै कुरा गर्दा पनि भुवन चन्द दिज्जु, माला सिन्हा,नीर शाह, सि पि लोहनी, शिव शंकर, बसुन्धरा दिज्जु, तृप्ती, मिनाक्क्षि, विश्व बस्नेत, शर्मिला मल्ल, कृष्ण मल्ल, रबिन्द्र, भुवन, शिव, गौरी,मिथिला, मौसमि, कृष्टी, राजेश, धिरेन, रमेश, दिलिप, रेखा, अन्य धेरै कलाकार नाम लेखेर सक्दिन यती धेरै हुनुहुन्छ ! अन्य प्राविधिज्ञ र अरु पाटोहरुको चलचित्र क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान छ । सबैलाई दर्शकले आ- आफ्नो स्थानमा मन पराउनु भयेको छ ।चलचित्र क्षेत्र निर्माणमा यी सबैले एउटा ईटाको रूपमा आफ्नो योगदान दियेका छ्न ।
यो तितो सत्य सबै समकालीन कलाकर्मीहरुले सुइँकार्नु पर्छ जुन जमिनमा टेकेको छौ तेस्मा अगुवाहरुको पनि योगदान छ ।उनलाइ इज्जतको दृष्टिकोणले हेर्न सके आउदो पुस्ताले वाहाँहरुलाई पनि सोही किसिमको सम्मान गर्लान ।चलचित्र पत्रकारहरु ले पनि पुष्करलाल श्रेष्ठ देखि लिएर आजभोलिका भाइहरुको पनि उत्तिकै योगदान छ ।
किन आजकल भनाइहरु बिबादास्पद हुन्छन ?
मिडियाको शैली परिवर्तन भएको छ द्रुतगतिमा खबर मासमा पुग्छ ।येस्मा न पत्रकार मित्रहरूको गल्ती छ न चलचित्र कर्मिको । यो सहकार्य भएकोले कुन विषयमा कुरा गर्दै छौ प्रष्ट भयेर कुरा गरेमा येस्तो त्रुटी हुदैन थियो होला ।र सिनेमा चलाउने बेलामा सबै ठाउँमा चाहिने भन्दा बढी प्रस्तुत हुने । अनि पत्रकारले क्यामारा तेर्साउदा उपलब्ध भये कलाकार भन्नू भएन !!
यो परम्परा कस्ले चलायो ?
गल्ती एकतर्फीय कहिले पनि हुदैन । यो विषय मा छलफल गर्नुपर्ने देखिन्छ । यो क्षेत्रको इज्जत रहे न हाम्रो इज्जत रहला ।
२०७७, ३० श्रावण शुक्रबार १६:२०
२०७७, ३० श्रावण शुक्रबार १५:३८
२०७७, ३० श्रावण शुक्रबार ०९:५८
२०७७, २९ श्रावण बिहीबार २३:०३
२०७७, २९ श्रावण बिहीबार १८:५४